Semalt waxay bixiyaan talooyin ku saabsan sida loo maamulo Google Analytics Referrer Spam
Guud ahaan, spam u gudbinta moobiilka Google waa spam kaas oo dhaca marka qaylo-dhaanadku isku dayaan inay diraanxogta koontadaada Google Analytics adigoo isticmaalaya Google uruurinta xog ururinta xogta Google oo badanaa loo yaqaan habka cabbirka.Dareenka dhabta ah, tani ma aha gaadiidka dhabta ah ee website-kaaga. Waxay, si kastaba ha ahaatee, waa codsiyo been abuur ah oo loo soo diro boggaaga boot ka mid ahnooca iyo sida oo kale ama maaha, waxay ku tusi doonaan gudbintaada.
Michael Brown, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare ,wuxuu sheegayaa in aysan ahayn sabab loo quusto. Marka ugu horeysa, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in goobtaada aan la qorsheyneynin. Khasaaradawaxay kaliya abuurayaan aqoonsi been abuur ah waxayna kuu soo dirayaan codsiyo been abuur ah - certified rv appraisals. Maaha wax shakhsi ah laakiin waxay noqon kartaa wax aad u dhib badan.
Google wuxuu ku yimid qorshe uu ku caawinayo arrinta. Dhamaan waa inaad sameysid waatagaan goobaha aad ku aragtid interface maamulaha, hoos ugu dhufan Bot filtering oo hubi ikhtiyaarkaaga, 'Ka saar dhamaan hits of calaamadaha loo yaqaaniyo caaro. Tani ma aha xal waqti dheer, hase yeeshee tan iyo markii loo gudbiyo been-abuurka ayaa maalin kasta soo baxa.
Xalka kale ee aad isku dayi kartid waa fiilooyin leh ujeeddada laga reebogudbinta..Tani waxay ku lug leedahay inaad tagto qaybta maamulka, kadibna tagto Filters. Halkan waxaad dejin kartaa shaandho loo yaqaan 'referrer'ku-salaysan ka-saarista. Tani waxaa lagu gaaraa adoo gujinaya Filtar, xulashada nooca Custom, ka dibna qoraya magacyada domain gudbintaqaybta qaabka filter.
Si kastaba ha noqotee, xitaa haddii aad si buuxda u geyn kartid boggaaga shaandhada ka saarida, waqtigaa domain cusub soo wareejin, aad u leedahay inaad soo saarto xad-dhaaf cusub oo ka tirtirto jirkooda hore. Sidoo kale, waxaa laga yaabaa in aad ka baqdotirada santuuqa ee aad u leedahay in aad maareyso.
Tani waxay ka jawaabaysaa su'aasha, ma kareyn karaa filtarrada? Jawaabta waa haa, waad tagi kartaawaddadan. Tusaale wanaagsan oo adeeggani ah waa Referrer Spam Blocker. Waa adeeg aad u weyn marka ay isku xirto mawduucoodaAkoonka Google Analytics, ka dibna wuxuu dooranayaa aragtida aad rabto in goobtaada laga ilaaliyo. Waxay ku dambeeyeen kudheerayaasha fara-gelintaaragtidaada.
Inkastoo tani ay tahay mid soo jiidasho leh, ma isticmaali kartid shirkadda badankeedamacaamiisha maadaama ay leeyihiin sharciyo adag oo ku saabsan sida adeegyadooda SaaS loogu heli karo dhinac saddexaad. Sida hadda, tani waa adeeg bilaash ah,laakiin ugu dambeyntii, waxay ku qasban yihiin inay kufaraan guulahooda ayna hirgaliyaan qaab lagu qiimeeyo, kuwaas oo aan laga yaabo inay dantaada ku jirtomacmiil.
Si kastaba ha noqotee, shaandhaynta waxay heli doontaa oo keliya ilaa hadda, adeegyadda automated ma ahaninay noqoto mid lagu kalsoonaan karo muddada dheer. Tani waxay ka baxaysaa furayaasha xog ururinta. Iyada oo ikhtiyaarkan, xogtaada waa la ciribtiray, Google Analytics ayaa kaliya oo kaliyaku hayaan tahriibta ka soo baxa cabbirkaaga caadadaada. Waa hab gaar ah oo aan saameyn ku yeelan doonin spamka. Sidoo kale, waa ammaan iyokalsooni la'aan, iyada oo aan u baahnayn aqoon farsamo si loo dejiyo. Tani waxay ka dhigeysaa xulashada ugu fiican ee koontada Google Analytics.